AC lwekontraka Factory | I-china i-ac contactor abavelisi kunye nababoneleli
CJX2-F Series AC lwekontraka
CJX2-F series AC lwekontraka ilungele AC 50 / 60Hz, ombane ulinganiselwe ukuya 1000V, ulinganise yangoku 115-800A wesekethe, esetyenziselwa-umgama elide ukwaphula yangoku kunye rhoqo okanye ulawulo iinjini. Isetyenziselwa ukulawula ukujikelezwa kwamandla ngokujikeleza okulinganisiweyo kwe-200-1600A.
JMC (GMC) series AC lwekontraka ilungele ukusetyenziswa kwiisekethe ukuya ombane ulinganiswe 660VAC 50Hz okanye 60Hz,, ulinganiswe yangoku ukuya ku 95A, ngokwenza, ngokwaphula, rhoqo ukuqala & isixhobo-ukuvaleka isixhobo njl, kuba kulibaziseka lwekontraka, isixhobo sokunxibelelana phakathi koomatshini, inkwenkwezi-delta yokuqalisa. kunye relay overload thermal, oko kudityaniswe kwi ukuziqalela electromagnetic. Isinxibelelanisi siveliswa ngokwe-lEC60947-4.
CJX2-K (LC1-K) Uthotho lweeNxibelelanisi ze-AC
CJX2-K series AC lwekontraka ilungele ukusetyenziswa kwisekethe ukuya kwinqanaba kunye nokuqala rhoqo, ukulawula AC motor. Ukongezwa kweqela lokunxibelelana elingabancedisi kulowo unxibelelana naye, kudityaniswa ne-relay efanelekileyo ye-thermal, kunokusebenza ukukhusela isekethe ebotshiwe ukuba igcwalise ngaphezulu. Iyahambelana ne-1EC60947-4-1.
Ukuqhutywa kwesiqhelo kunye neemeko zokuFakelwa:
1. Iqondo lobushushu lomoya: -5 ℃ + 40 ℃. Ixabiso eliphakathi alifanelanga ukudlula kuma-35 ℃ kwiiyure ezingama-24
2. Ukuphakama: ubuninzi be-2000m.
3. Iimeko zemozulu: Xa ubushushu ku-40 ℃, ukufuma okuhambelana ne-atomsphere kufanele kube njalo Ngelo xesha amaqondo obushushu asezantsi, kunokuba nokufuma okuphezulu.
4. Udidi longcoliseko: Udidi 3
Udidi lofakelo: Ⅲ
6.Iimeko zokufakwa: Umgangatho wokuthambekela phakathi komphezulu ofanelekileyo kunye nomphezulu othe nkqo akufuneki udlule kwi-II
7. Ukothuka kwempembelelo: Imveliso kufuneka ifakwe kwaye isetyenziswe kwindawo apho kugungqiswa rhoqo kunye neempembelelo.
10KV zokwambathisa ukugqobhoza uqinisa
I-CJX2-Fseries AC contractor (apha ishunqulelwe kunxibelelwano) yenzelwe ukwenza kunye nokwaphula isekethe ephambili, ukuqala rhoqo nokulawula iimoto ze-AC kwinkqubo yamandla rhoqo kwe-AC 50 Hz (okanye i-60 Hz), ukuba ifakwe ikhoyili ekhethekileyo, amaza I-be40 ~ 400Hz, ulinganisela umbane osebenzayo ukuya kuthi ga kwi-630v, Inokusetyenziswa kwizixhobo zombane ezahlukeneyo, i-electromotor kunye nolawulo lwesekethe ukuba zidibene nempendulo efanelekileyo okanye esinye isixhobo sombane ngokubanzi. Ukongeza, inokusebenza njengeqhagamshela elinonxibelelwano ngomatshini elixhotyiswe ngeqela labancedisi, inqaku lokulibaziseka komoya kunye nokuqhekeka koomatshini, okanye ukuziqalela kwe-electromagnetic kunye ne-relay efanelekileyo ye-thermal.
CJX2-K series izihlanganisi AC zilungele iisekethe kunye nesantya ukuqala rhoqo ukulawula Motors AC. Yandisa iqela lokunxibelelana lomncedisi we-contactor, uhlala kunye ne-relay efanelekileyo ye-thermal, kwaye unokuthatha isenzo ukukhusela isekethe ekugqithiseni. Iyahambelana ne-IEC60947-4-1
CJX2-D series AC lwekontraka
CJX2-D series AC lwekontraka ilungele ukusetyenziswa kwiisekethe ukuya ombane ulinganiselwe 660V AC 50Hz okanye 60Hz, ulinganise yangoku ukuya ku 660A, ngokwenza, ngokwaphula, rhoqo ukuqala & ukulawula motor AC, kudityaniswe ibhloko zoqhagamshelwano abangabancedani, Ukulibaziseka kwexesha kunye nesixhobo sokudibanisa umatshini njl.njl.
Ubukhulu kunye nobungakanani bokunyuka
Izinto zokunxibelelana nomoya (apha ekubhekiswa kuzo njengabafowunelwa), esebenza ikakhulu kwi-50Hz okanye kwi-60Hz, ngombane wokulinganisa umbane osebenzayo kwi-AC-8a
Ukulinganiswa okwangoku kwi-240V okanye kwi-277V ukuya kwi-40A yesekethe kulungele ukuqala nokulawula isigaba esinye se-AC Motors (icompressors) kunye neminye imithwalo yesigaba esinye.
Isetyenziswa ikakhulu kwishishini lesixhobo sasekhaya, ngakumbi kumzi-moya. Ungabuyisa uhlobo olufanayo lokungeniswa kwamanye amazwe kunye neemveliso zesintu zasekhaya,
Dibana ne-IEC 60947. 4, UL508 kunye ne-GB 14048 .4 imigangatho.
I-1 coil VA ephantsi yokusebenza okupholileyo kunye nobomi obonyukayo.
Abafowunelwa waqhekeza Double ukuqinisekisa qiniseka wenze kunye ikhefu.
5.Screw terminal okanye izihlanganisi zoxinzelelo kunye ne-1/4 ngokukhawuleza ukudibanisa.
6.Provided kuzo zonke iimodeli ufakelo lula.
CT Series Umnxibelelanisi wasekhaya
I-CT Series Household AC Contactors zikulungele ukusetyenziswa kwiisekethe ukuya kwi-voltage ene-400V AC 50Hz okanye i-60Hz, ikalwe ngoku ukuya kuthi ga kwi-63A, ukulawula izixhobo zombane kunye nokusetyenziswa okufanayo 'okuphantsi kwemithwalo, nokulawula ukulayishwa kweemoto zasekhaya, Amandla okulawula aya kuncitshiswa, Iimveliso zisetyenziselwa usapho, ihotele, indawo yokuhlala njl njl, kwaye, inokufezekiswa umsebenzi ozenzekelayo, Imveliso ihambelana nemilinganiselo ye-GB17885, IEC61095, imigangatho ye-EN61095.
JMC Series Ac lwekontraka
JMC (GMC) series AC lwekontraka ilungele ukusetyenziswa kwiisekethe ukuya ombane ulinganiselwe 660VAC 50Hz okanye 60Hz, ulinganiswe yangoku ukuya ku 95A, ngokwenza, ngokwaphula, rhoqo ukuqala & isixhobo ukuvaleka umatshini njl, iba ukulibaziseka lwekontraka, isixhobo sokunxibelelana phakathi koomatshini, star-delta starter. kunye relay overload thermal, oko kudityaniswe kwi ukuziqalela electromagnetic. Isinxibelelanisi siveliswa ngokwe-IEC60947-4.
CJX2-D series AC lwekontraka ilungele ukusetyenziswa kwiisekethe ukuya ombane ulinganiselwe 660V AC 50Hz kr 60Hz, ulinganiswe yangoku ukuya ku 660A, ngokwenza, ngokwaphula, rhoqo ukuqala & ukulawula motor AC, kudityaniswe ibhloko zoqhagamshelwano abangabancedani, Ukulibaziseka kwexesha kunye nesixhobo sokudibanisa umatshini njl.njl.